Ukhiye wenkululeko nokusindiswa kwabantu abaNsundu / abantu base-Afrika: uma abantu abamnyama / abantu base-Afrika befisa ukukhululelwa kanye nokusindiswa, badinga ukhiye, futhi lokhu kukhiye kungafinyeleleka kubo
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 18, 2020 06: 44 1 Comment
Abantu abathandekayo Black / Afrika, ikakhulukazi nina baseCongo: Ngabe ufuna ukukhululwa nokusindiswa kwakho? Awazi yini ukuthi uzoqala kuphi noma kanjani uyibeka lapho ?? Bamba ukukhululeka kwakho kanye nokusindiswa kwakho kumele kuqhamuke kuwe, ngalokho okuthandayo ukukwenza nokwazi ukwenza; okungcono, ngalokho okwenzayo nsuku zonke.
Ngikholwa ngokweqiniso, ukusindisa abantu Black / Afrika, ukuthi inqubo yemfundo kumele yenzeke ezigabeni ezimbili: "Ugqozi nolwazi". Impela wonke umuntu uyazi ukuthi angayenza kanjani into ekhethekile nehlukile. Yilowo nalowo unikezwe amandla nokuqonda okufana nokuthi, lapho esetshenziswa kabi, okungakuvumela ukuthi kube nomthelela omuhle esizukulwaneni sakhe futhi kumake isikhathi sakhe. Wonke umuntu kufanele abelane ngemininingwane yokuphefumlelwa kwabo enhlalakahleni yabo bonke.
Namuhla, abantu abaningi bakulandela, bathande nje okwenzayo ngamavidiyo akho… ect : kuhle kusuka kuwe! Kodwa-ke, ukubonakala kwakho kuzoba nencazelo eyengeziwe yokufezeka njengoba ungaqala ukusifundisa, ukudlulisa kithi imininingwane noma imiyalezo yokuphefumlelwa kwakho. Kusuka ku-buzz yamavidiyo akho, thatha ithuba lokudlulisa izithunywa ezithile, ngisho nemizuzu engu-2 yokugcina ukuthinta okungasiza ukukhipha abantu osizini Black / Afrika, futhi ikakhulukazi abantu baseCongo.
Makwazeke kikho konke lokho, ukusindisa abantu Black / Afrika, ukhiye hhayi ukubheka kwenye indawo ukuvula umnyango oholela Ensindisweni; abantu Abansundu / Afrika uyibambe:"Kwanele ukubhekela abafowenu nodadewenu konke enikuthandayo futhi enikwazi ukukwenza kangcono".
Nansi indlela I-Kongolisolo ukhumbuza bonke abasebenzisi bayo be-intanethi ukuthi yenza isigaba esibizwa nge- "Space yakho" sitholakale kubo. Kuyindawo yamahhala. Ngakho-ke ungayisebenzisa ukushicilela izinto zakho eziyizintandokazi.
Isiphetho sezizwe ezifulathela amasiko okhokho bazo: abantu abangazi umlando waso ufana nesihlahla esingenazimpande "Bheka la ma-negroes angenalwazi (amaSulumane / namaKhristu) ahlanganyela ekuguquleleni abantu, bachitha isikhathi sabo esiyigugu bexoxa ngezinkolo zamakhosi abo ”… (VIDEO)
Ubuwazi Kubhekwe ukuthandwa kweSainte Corona ngenxa yeCovid-19? Esikhathini sesifo segciwane leCorona ngo-2019 (Covid-19), iSanta Corona ingaqhamuki ivela emgqonyeni womlando
Ngempela loobi penza bosolo
Yini inzuzo yerekhodi lokuphila isikhathi eside labamongameli abamnyama / base-Afrika abasemandleni? Abongameli abaningi abaMnyama / base-Afrika baphuphe futhi baphupha ngamandla angapheliyo ... (VIDEO)
Ngo-Ephreli 7, 2020 00: 00